I-pink halite: izici, ukwakheka, ukusetshenziswa nokunye okuningi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 20/10/2021 10:00 | I-Geology
IHalite iyinhlobo kasawoti wemvelo. Kuyinto yamaminerali ejwayelekile futhi eyaziwa kakhulu ngoba ifundwe ngokujulile. Enye yezinhlobonhlobo zayo i-halite ebomvana. Inqwaba eqinile nezixazululo ezincibilikile zitholakala olwandle nasemachibini kasawoti. Kubaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwentengiso futhi kudingeka kakhulu ilukuluku layo.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-pink halite, ukuthi yiziphi izici zayo nokusetshenziswa kwayo.
1 I-halite ebomvana
3 Ukusetshenziswa kwe-pink halite
4 Itholakala kuphi
Amachibi asezweni acebile ngosawoti akhona ezindaweni ezomile futhi angaba ngaphansi kogu lolwandle ngaphandle kwezindawo zokuthengisa. Lawa machibi ayahwamuka ngenkathi eyomile, okudala ukwehla kwamazinga wamanzi nokwanda kukasawoti. Lapho lokhu kwenzeka, usawoti uzokwakha ogwini lwechibi elihwamukayo. Lokhu kungenzeka futhi lapho imifudlana evela echibini likasawoti iphambukiselwa ukusetshenziswa kwabantu nezolimo, okwenza ichibi lome futhi lenze usawoti owengeziwe ogwini oluseluhwamukile. Amachibi amaningi asemaphakathi nezwe asomile, kusale izimayini zikasawoti eziningi ezingasetshenziswa ngokuhweba.
I-halite ebomvana futhi ikhona ezindaweni ezingezona ezomile futhi ingafinyelela amadiphozi ajulile angaphansi komhlaba. Imali engaphansi kukasawoti wedwala ivame ukususwa ngokumba izimbobo ezingxenyeni zikasawoti bese kungeniswa amanzi ashisayo, aqeda ngokushesha usawoti ku-brine. I-brine igcwele usawoti oncibilikisiwe bese uyakhishwa. Hlanganisa i-brine, ukhanyise futhi uqoqe usawoti osele. Iningi likasawoti wedwala otholakalayo wentengiso wenziwa nge-bittern evunguziwe, esikhundleni samakristalu emvelo aluhlaza. Usawoti wedwala wenziwa futhi ukuhwamuka emithonjeni kasawoti. Amanzi anosawoti asemithonjeni kasawoti ageleza esuka enhlabathini engaphansi aye echibini likasawoti bese ewela ezintweni eziyindilinga eziyindilinga.
Kweminye imigodi kasawoti engaphansi komhlaba efana neTexas neLouisiana, usawoti ududulwa ngamandla angaphansi komhlaba enhlabathini ethambile, ukwakha isakhiwo se-arched esibizwa ngokuthi i-dome usawoti. Lawa ma-deposits nawo awumthombo obalulekile wokusebenza kwezimayini zikasawoti futhi ayizinhlaka ezihlukile kakhulu ze-geological.
Yize umbala wombala wosawoti wedwala ungadalwa ukungcola, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama kanye ne-violet empeleni kubangelwa ukukhubazeka ku-crystal lattice. Okuphinki nokubomvana kwamasampuli amaningi kasawoti wedwala owomile kudalwa amagciwane e-algae ahlukahlukene.
Ngokuvumela ikhambi eligcwele le-brine liqhume, usawoti wokuzakhela wedwala angajika kalula abe amakristalu. Njengoba i-brine iyahwamuka futhi amakristalu akhula, kungakhiwa ikyubhu emise okofele. Amanye amasampula kasawoti edwaleni emakethe empeleni amakristalu akhiwe ngendlela engeyiyo ngale ndlela.
Ukusetshenziswa kwe-pink halite
Usawoti wedwala ungumthombo kasawoti wetafula. Kusetshenziswa imali enkulu kasawoti edwaleni ukukhipha usawoti. Usawoti unokusetshenziswa okuningi futhi kufanele ukhishwe ngobuningi ukuhlangabezana nesidingo. Okunye ukusetshenziswa kwayo okuvame kakhulu ukunambitheka kokudla, ukuphepha emgwaqeni ukuncibilikisa iqhwa neqhwa, njengosawoti wemfuyo (onikeza usawoti emfuyweni, obalulekile empilweni yawo), nangezinjongo zokwelapha. Usawoti wedwala futhi uyinto ebaluleke kakhulu yamaminerali, i-sodium ne-chlorine.
Usawoti wedwala uqhamuka ezindaweni eziningi futhi kunezimayini zikasawoti ezinkulu emhlabeni wonke. Kodwa-ke, uma kubhekwa inani elikhulu lezimayini zikasawoti, izibonelo ezinhle ngokusobala azijwayelekile. Ikhiyubhu ephelele kumatrix yake yavela eSalzburg, e-Austria, ngenkathi amakristalu amahle, ikakhulukazi amakristalu aluhlaza okwesibhakabhaka, avela emayini kasawoti eStasford, eHessen, eJalimane. Kunezimayini eziningi zikasawoti eziningi ePoland, ezinye zazo ebezikhona amakhulu eminyaka futhi zakhiqiza izibonelo. Lokhu kufaka phakathi i-Inowroclaw, iLubin, iWieliczka, neKlodawa. Ezinye izifunda zakudala zaseYurophu zifaka iLa Carmuto e-Agrigento, eSicily, e-Italy; neMulhouse ese-Alsace, eFrance, lapho ivela khona ngesimo semithambo enezicubu.
Izilwandle ezifile kwa-Israyeli naseJordani ziyahwamuka kancane kancane futhi ugu lwazo luyaqhubeka nokudamba. Lokhu kuholela ekukhuleni kwe- ukwakheka kwedwala usawoti okuthakazelisa kakhulu nokwakheka kwekristalu eduze kwamanzi. E-United States, kunamadiphozithi amakhulu angaphansi komhlaba eNew York, eMichigan, e-Ohio, eKansas, e-Oklahoma, eTexas, naseLouisiana, futhi kwenziwa izimayini zikasawoti ezentengiselwano kulezi zifundazwe. Kokubili iDetroit, iMichigan neCleveland, e-Ohio kukhiqiza izimayini zikasawoti zamatshe ngqo ngaphansi kwedolobha.
Ama-pink halite deposits akhiwa ngu kwezulu lokuhlushwa okuphezulu kasawoti oncibilikiswe emanzini. Kulesi simo, kudingeka i-brine medium ene-low energy enezinga eliphakeme lokuhwamuka kanye nezinga lokugcwalisa kabusha amanzi esikhathini esifushane kakhulu se-geological.
Ekuthomeni kasawoti obizwa nge-pink Himalayan, kwakhiwa inhlabathi evuthayo e-Mesozoic Era cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-255 edlule, ikakhulukazi eTriassic. Cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-75 edlule, ngesikhathi seCretaceous, ukushayisana kwamapuleti ase-Asia naseNdiya kwakha ibhande le-orogenic, namuhla elibizwa ngokuthi yi-Himalaya. Phakathi nale nqubo, amanye amadiphozithi, kufaka phakathi amadiphozi amanzi anosawoti wemvelaphi ye-evaporite, agxilwe ezindaweni ezincane, okwaholela ekufakweni ngenani eliphakeme lamaminerali kasawoti wedwala.
Ingancibilika emanzini futhi isetshenziswe njengokuzilungiselela okwenziwe ngamanzi amaminerali, futhi ingasetshenziswa njengo "usawoti wetafula" ekhishini nge-grinder ekhethekile. UMnyango Wezempilo waseJalimane ukwazile ukuthola izinhlobo ezifinyelela kwezingu-10 ezahlukahlukene zokulandela umkhondo kulo usawoti, ngokuqukethwe kwe-sodium chloride ka-98% (okwenza kube usawoti ongachazwanga). Okuqukethwe okuphezulu kakhulu ngemuva kwe-NaCl yi-magnesium (0,7%). Ngezinye izikhathi isetshenziswa njengosawoti we-kosher. Lapho isetshenziselwa imikhosi noma ukuhlobisa nje, itholakala ekwenziweni kwamalambu kasawoti. Isetshenziselwa ukusetshenziswa kwemithi ethile, kepha ayihlukile kunoma yimuphi omunye usawoti.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-pink halite nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » I-halite ebomvana